နေ့တိုင်း ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပါ - YOYARLAY Digital Media and News
နေ့တိုင်း ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပါ
Published: April 26, 20194:31 pm Updated: December 12, 20209:23 pm
ကျွန်တော်တို့ လည်ချောင်းနာတာ၊ သွားဖုံးသွေးထွက်တာတွေ ခံစားရတဲ့အခါ ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းဖို့ မကြာခဏ အကြံပေးခံရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနည်းက ဈေးလည်းမကြီး၊ လွယ်လည်းလွယ်ကူတဲ့အပြင် အိမ်မှာ လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆိုကျိုးမှ မရှိတာကလည်း အဲဒါရဲ့အားသာချက်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးပြဿနာအသေးအမွှားတွေကို ကုသတဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတာကို အကြံပြုထားတဲ့ သုတေသနပြုချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်း ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတချို့ကို သိရှိစေဖို့အတွက် ပြောပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
pH ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးခြင်း
ဆားရည်နဲ့ပလုတ်ကျင်းတာဟာ ဘတ်တီးရီးယားက ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ လည်ချောင်းမှာ ရှိတဲ့အက်ဆစ်တွေကို လျော့ပါးစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ခံတွင်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ဘတ်တီးရီးယားတွေ ကြီးထွားမလာအောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ pH ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတာကလည်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနဲ့ နှာခေါင်းပေါက်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒါက နီမြန်းခြင်းတွေကို လျော့ချပေးသလို လည်ချောင်းနာကျင်မှုကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ နှာပိတ်တာတွေ ဖြစ်လာစေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုလည်း ဖယ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာတွေကြောင့် အာသီးရောင်ခြင်းတွေ အဖြစ်များကြပါတယ်။ အာသီးရောင်တာက အစားအစာ မျိုချတဲ့အခါမှာ တော်တော်လေး နာကျင်ပါတယ်။ ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းမယ်ဆိုရင် နာကျင်တာတွေကို ပြေလျော့စေသလို အဲဒီလိုဖြစ်တာကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးကြောင့် စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင် ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတာက အဲဒါကို ဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့နည်းတစ်နည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနံ့ဆိုးတွေ ဖြစ်လာစေတဲ့ ခံတွင်းအတွင်းက ဘတ်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားနာခြင်းနဲ့ သွားဖုံးသွေးထွက်ခြင်းတွေကို သက်သာစေခြင်း
ဒီနည်းလမ်းက သွားဖုံးရောင်တာ၊ သွေးထွက်တာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ သွားဖုံးရောင်တာ၊ သွေးထွက်တာတွေက ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ သွားဖုံးရောဂါရဲ့ ပထမဆုံးလက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ရောင်ရမ်းတာကို လျော့နည်းစေပြီး ဘတ်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ သွားနာတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်အပူကန်ခြင်းထက် ပိုပြီး နာကျင်တာ မရှိတော့ပါဘူး။ အစားအစာဖို့ ခက်ခဲသလို ရေသောက်ရင်တောင် နာကျင်ရပါတယ်။ ဆားရည်က နာကျင်တာတွေကို ပြေလျော့စေနိုင်တဲ့အပြင် ပျောက်ကင်းအောင်လည်း ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆားရည်နဲ့ ဘယ်လို ပလုတ်ကျင်းမလဲ
ရေနွေးနွေးလေး တစ်ခွက်ထဲကို ဆား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်) ကိုထည့်လိုက်ပြီး လုံးဝ ပျော်ဝင်သွားတဲ့အထိ မွှေလိုက်ပါ
ဆားရည်ကို ပါးစပ်ထဲ ငုံထားလိုက်ပါ
ခေါင်းကို မော့ချလိုက်ပြီး စက္ကန့် (၃၀) လောက် လည်ချောင်းမှာ ဆားရည်ကို ပလုတ်ကျင်းလိုက်ပါ။ အဲဒီနောက် ထွေးထုတ်လိုက်ပါ။
ခွက်တစ်ခွက်လုံး ကုန်တဲ့အထိ အဲဒီနည်းကို လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
Ref: TOI “Here is why you should gargle with salt water every day”
Previous Previous post: ၂၀၂၀ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မယ့် ဂျိုးဘိုင်ဒင်
Next Next post: ခီမောင်နှံရဲ့ ပီတိပွားစရာ အလှူဒါန
ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ အယ်မွန်စေ့ကို ဘယ်လိုလူတွေ မစားသင့်လဲ
အစေ့အဆံစားပေးပါဆိုရင် အယ်မွန်စေ့ကို အများဆုံးစားဖြစ်ကြတယ်မလား။ ပရိုတင်း၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ပိုတတ်စီယမ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ဗီတာမင်အီဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့ ဒီအယ်မွန်စေ့က ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရှိပါတယ်။ အသားရေကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အပြင် နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး သွေးဖိအားကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့…
Published: July 23, 20209:11 am
ပြတ်သွားတဲ့ အဆက်ဟောင်း (ex) နဲ့အလုပ်သဘောအရ ဘယ်လိုဆက်ပြီး ဆက်ဆံမလဲ
ပြတ်သွားပြီးတဲ့ ex နဲ့တစ်နေရာထဲမှာ အလုပ်လုပ်တူတူလုပ်နေရတာ နည်းနည်းတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ် မဟုတ်လား။ ကိုယ်ရှိနေတဲ့ အလုပ်ကို အဲဒီ ex ကရောက်လာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစထဲက အတူတူအလုပ်လုပ်နေရင်း၊ တွဲနေရင်းနဲ့မှ ပြတ်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုနေရမယ်၊ ထိုင်ရမယ်မှန်းမသိဖြစ်နေရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးဟာ…
Published: December 26, 20189:29 am
အသက် ၃၀ မတိုင်ခင်မှာပဲ ထိပ်ပြောင်နေပြီလား? ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထိပ်ပြောင်တဲ့သူတွေရှိနေပြီလား? ဒါဆိုရင် ဘယ်လို တားဆီးကြမလဲ ဆိုတာလေး လက်တို့ပြောပြလိုက်ပါရစေနော်။ အခုခေတ်မှာ အသက် ၃၀ လောက်တောင် မရောက်သေးဘဲ ဦးခေါင်းမှာ ဆံပင်ပေါက်တာ…
Published: August 24, 201812:36 am Updated: April 16, 201912:16 pm